तनावमा हुनुहुन्छ ? तुरुन्तै मुड चेन्ज गर्नुहोस् ! | Kendrabindu Nepal Online News
तनावमा हुनुहुन्छ ? तुरुन्तै मुड चेन्ज गर्नुहोस् !
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार ११:२५
हाम्रो जीवनमा धेरै किसिमको उतारचढाव आउँछ । कहिलेकाही यस्तो परिस्थिति पनि आउन सक्छ, र हामी दुःखी हुन्छौं । हामीलाई केही काम गर्न मन लाग्दैन् । यस्तोमा धेरैबेर सम्म तनावमा रहिरहन्छौं । तनावमा रहँदा विस्तारै डिप्रेसनको शिकार बन्छौं ।
अहिलेको समयमा हरेकलाई समस्याको तुरुन्त समाधान वा उपाय चाहिन्छ । सबैसँग समयको अभाव छ । हाम्रो जीवन एकदमै व्यस्त छ । हरेक दिन कामको लागि भागदौड गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यस्तताको कारण धेरैजसो तनावमा हुन्छौ । तनावको कारणले हाम्रो पुरै जिन्दगी बर्वाद हुन्छ । तनावबाट मुक्त हुनको लागि धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्दैन् । सजिलैसँग तनावमुक्त हुन सकिन्छ । त्यसको लागि यस्तो छ उपायहरुः
लामो सास फेर्नेः
लामो सास फेर्दा हाम्रो शरिरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्छ । ब्रेनमा पनि प्रयाप्त अक्सिजन पुग्छ । जब ब्रेनमा अक्सिजनको मात्रा अधिक हुन्छ, ब्रेनले राम्रोसँग काम गर्छ र फिल गुडको हर्मोन उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दा तनावमुक्त हुन सहयोग गर्छ ।
संगीत सुन्दा हाम्रो शरिरमा एन्डोर्फिन हर्मोन उत्पादन हुन्छ । जसको कारणले गर्दा खुशिको महसुस हुन्छ । तुरुन्त तनावमुक्त हुनको लागि संगीत पनि एक उत्तम उपाय हुन सक्छ । त्यसैले आफुलाई मनपर्ने संगीत सुन्दा राम्रो हुन्छ ।
जब तपाई दुःखी हुनुहुन्छ, त्यतिबेला तपाईलाई कसैसँग बोल्न मन लाग्दैन या घरबाट निस्कन मन लाग्दैन । तर, यस्तोमा तपाई झन दुःखी महसुस गर्नुहुन्छ । त्यसैले बाहिर पार्कमा घुम्न निस्कनुहोस् । घरमा बस्नुको सट्टा बाहिर घुम्न निस्कदा तुरुन्तै मुड फ्रेस हुन्छ ।
समय जस्तो सुकै भए पनि मुस्कुराउने कोशिस गर्नुहोस् । तनावमा मानिसको अनुहार पनि मलिन देखिन्छ । यस्तोमा केहि खुशी हुने भिडियो हेर्न सक्नुुहुन्छ । जोक्स पढ्न सक्नुहुनेछ । जुुन कारणले तपाईको अनुहारमा मुस्कान पैदा गर्छ, त्यही गर्नुहोस् । त्यसबाट तुरुन्तै तनाव कम हुन्छ ।
tension, जीवन, तनाव, संगीत
Prevबलात्कारको आरोपमा वडा सदस्य पक्राउ
सामूहिक बलात्कारपछि न्याय नपाएकी महिलाले आफैंलाई लगाईन आगोNext
जीवनमा प्रयोग हुने शिक्षा आवश्यक : पूर्वराष्ट्रपति यादव